China Body-of-Combination-Assembly-Manifold-Integration-Jigs-Fixtures-Solution ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị nrụpụta | Weldo
Igwe mgbakọ, mgbakọ eletrik
Mgbe emechara nhazi maka akụkụ niile nke CNC, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị nwere ike ịnye ọrụ mgbakọ maka igwe, ihe ndozi, ihe ndị na-akwado ya, wdg. Dabere na eserese mgbakọ nke ndị ahịa nyere. Nyere ndị ahịa aka ịchekwa oge, chekwaa ọrụ, ma chekwaa nchekasị.
1: Nhazi cnc machining akụkụ dịka nhazi eserese.
2: Imecha elu treament.
3: Dịka ichikota eserese iji kpokọta akụkụ maka ndị ahịa.
Na anyị na-eduga technology nakwa dị ka mmụọ anyị nke ọhụrụ, ibe imekọ ihe ọnụ, uru na ọganihu, anyị ga-ewu a bara ọgaranya na-eme n'ọdịnihu ọnụ na-akwanyere ùgwù nzukọ maka China OEM China OEM igwe ịtụgharị lathe Parts nkenke ahaziri CNC machining Part, Ọtụtụ afọ nke ọrụ ahụmahụ, anyị achọpụtala mkpa ọ dị ịnye ngwaahịa dị mma yana ọrụ kacha mma tupu ahịa na ahịa.
Companylọ ọrụ anyị na-atụle "ọnụahịa ezi uche dị na ya, ịdị elu dị elu, oge nrụpụta nke ọma na ezigbo ọrụ ahịa mgbe a na-ere ahịa" dị ka ụkpụrụ anyị. Anyị na-atụ na-ekwenyere ndị ọzọ ahịa maka ibe mmepe na uru na-eme n'ọdịnihu. Nabata ịkpọtụrụ anyị.
Anyị ụlọ ọrụ kemgbe ya inception, na-emekarị banyere ngwaahịa elu-edu dị ka ụlọ ọrụ ndụ, mgbe niile mbo mbuli n'ichepụta technology, mbo mbuli ngwaahịa magburu onwe na nọgidere ike ụlọ ọrụ ngụkọta magburu onwe ochichi. Mgbakwunye ụlọ ọrụ, ntụkwasị obi na-aga ebe ahụ. Firmlọ ọrụ anyị na-arụkarị ọrụ gị n'oge ọ bụla.
Good Quality China CNC Parts, Machine Parts, companylọ ọrụ anyị na-akwado mmụọ nke "ọhụụ, nkwekọ, ọrụ otu na ịkekọrịta, ụzọ ụkwụ, ọganihu pragmatic". Nye anyị ohere ma anyị ga - egosipụta ike anyị. Site n'enyemaka gị, anyị kwenyere na anyị nwere ike ịmepụta gị ọdịnihu dị mma ọnụ
Chịkọta eserese ndị ahịa nyere kwesịrị n'ụzọ doro anya na ụdị PDF.
Q1: Ebee ka m nwere ike nweta ngwaahịa & ọnụahịa ozi?
A1: Zitere anyị email e-mail, anyị ga-akpọtụrụ gị ka anyị na-enweta ozi gị.
Q2: Ogologo oge ole ka m ga-enweta ihe nlele ahụ?
A2: Dabere na ihe gị akọwapụtara, n'ime ụbọchị 7 ka achọrọ n'ozuzu ya.
Q3: Kedu ụdị ozi ịchọrọ ịchọrọ?
A3: Obi oma biko nye ngwaahịa ịbịaru na PDF, ọ ga-aka mma na ị nwere ike kpalite na ntụpụ ụkwụ ma ọ bụ IGS
Q4: kedu usoro ịkwụ ụgwọ?
A4: Anyị na-anabata 50% dịka nkwụnye ego ịkwụ ụgwọ, mgbe ngwongwo ahụ mechara, anyị na-ese foto maka nlele gị wee kwụọ ụgwọ ahụ. Maka obere ego, anyị na-anabata Paypal, a ga-agbakwunye ọrụ Paypal na iwu ahụ Maka nnukwu ego, a na-ahọrọ T / T
Q5: Olee nyefee ngwongwo?
A5: Anyị na-ewepụta ngwaahịa ndị ahụ site n'aka ndị ozi ụlọ ọrụ ma ọ bụ dịka mkpa gị
Q6.Are ahia ahia ma obu ulo oru?
A6: Anyị bụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nwere ihe karịrị 10 ndị injinia nwere ọrụ na ihe karịrị ndị ọrụ 40 yana ebe ihe ọmụmụ 2,000 square mita.
Nke gara aga: Prelọ ọrụ na-arụ ọrụ dị iche iche nke ndị na-emepụta CNC - Weldo High Custom Custom Mere CNC Machining CNC Machined brass Parts - Weldo
Osote: Omenala-igwe-igwe-brass-machining-CNC-lathe-nkenke-machining-agbanye akụkụ.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ike ijide mgbanwe na ahịa ụlọ ọrụ a, mmelite ngwaahịa ngwa ngwa na ọnụahịa dị ọnụ ala, nke a bụ nkwado nke abụọ anyị, ọ dị mma.
Site na Karen si Dubai - 2018.02.12 14:52
Mbupu nke oge, mmejuputa iwu nke nkwekọrịta nke ngwongwo, zutere ọnọdụ pụrụ iche, kamakwa na-arụkọ ọrụ ọnụ, ụlọ ọrụ a tụkwasịrị obi!
Site na Renata si Indonesia - 2017.06.16 18:23